Patreon သင်ျဂိမ္း:အကောင်းဆုံးမိသားစုလိင် Simulation ဂိမ္း
င့်လျှင်သင်သည်အစဉ်အဆက်ကြည့်မှာသင်ျဂိမ်းများမီက၊သငျသညျကြောင်းကိုဖြစ်ကောင်းသတိထားမိတယ်ကြီးမားတဲ့မျိူးသူတို့ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအားဖြင့် Patreon။ ယနေ့တွင်၊ငါလိုအကြောင်းပြောဖို့အလွန်ကိုအထူးဝန်ဆောင်မှုရှိသည်၊ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုဖို့အကောင်းဆုံးအချို့ခေါင်းစဉ်ထွက်ရှိလာသောဖြောင့်မှပလက်ဖောင်း။ ကျွန်တော်တို့မှာတစ်မူထူးခြားတဲ့ထုတ်ကုန်ဒီမှာ၊ကျနော်တို့အနေဖြင့်ယုံကြည်ကြောင်းအများကြီးတစ်ငရဲ၏ဂိမ်းကစားချင်သွားကြသည်အတိအကျသိတတ်သောအရာကိုအပေါ်မှာ Patreon သင်ျ။, ခါတွန်းအားပေးတွန်းထိုးဖို့လာ၊မကြီးအာရုံကိုပက်ထုတ်ျဖင့္ဒေါ်လာလစဉ်အပေါ်အခြေခံထောက်ပံ့ဖို့အကောင့်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောခေါင်းစဉ်များ–ဒါကြောင့်ကိုယ့်မအကျိုးရှိစွာနှင့်နေစဉ်သင်ကြိုက်စေခြင်းငှါမိမိတို့အဂိမ်း၊ကခက်လွန်းစောင့်ရှောက်ဖို့အပေါ် tabs မွမ်းပြီးမှသေချာတိုးတက်မှုများအမှန်တကယ်ဖန်ဆင်းခံရပေါ်သမျှအတိုင်းဖြစ်ပါသည်ကစားချင်တယ်။ မဖော်ပြထားခြင်းအဘို့အကြောင်းအများကြီးဤသည္ကိုသင်အမှန်တကယ်ပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်အတော်လေးတော်တော်တစ်ပြားလက်ခံရရှိရန်နောက်ဆုံးပေါ်အုပ်၏ခေါင်းစဉ်ကသင်ချင်။, ၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်ဤအချက်ကို၊ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါတယ်မှာ Patreon သင်ျဂိမ်းကျနော်တို့အတွက်ပေးတာပေါ့ဖို့ရွေးချယ်စရာကစားအားလုံးဤကြီးစွာသောအသင်ျလုံးဝဂိမ်းမှတစ်စက်အပြောက်! ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောစနစ်၊နှင့်တဦးတည်းသောအကြောင်းပြောဆိုချင်တွက်ပိုပြီးအသေးစိတ်–အပေါ်ကျေးဇူးပြုပြီးဖတ်ပါအကြောင်းကိုသင်ယူဖို့ဘယ်အရာကို Patreon သင်ျဂိမ်းအကောင်းဆုံးအစဉ်အဆက်ဒီအာကာသ။
ထိုအချိန်ကအရေးအသား၏ဤအထွက်ရှိ ၁၁၂ ဂိမ်းငါတို့သည်သင်တို့အဖို့စီမံခန့်ခွဲမယ့်အရင်းအမြစ်မှများစွာကွဲပြားခြားနားသော Patreon ဝန္ေဆာင္မႈနိုင်ကစားအတွင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စ။ ကျနော်တို့ကသာအကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ခေါင်းစဉ်နှင့်နေစဉ်နိုင်ရာနှင့်ချီရန်၊ကျနော်တို့နေတဲ့စောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားနေကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုအဖြစ်ရေပေါ်ဆီအဖြစ်၊ဒါကြောင့်ဒါကအကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံးပူဇော်ကြသည်။ အခုတော့၊အလမ်းအခွင့်အဆိုပါဂိမ်းကစားကိုအထွက်ရှိပါတယ်မိမိတို့လက်ရရန်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်အဖြစ်ပေးသွားဖို့သင်တာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ မှန်တယ်–သင်ကမဆပ်ဖို့ရှိသည်ကစားရန်ဤဂိမ်း!, ဆိုလိုတာကသင်နမူနာဘို့ထိုသူတို့ကဲ့သို့ကြာမြင့်စွာသင်ချင်၊သုညနှင့်အတူကိစ္စများကို၊နှင့်ကိုယ်အဘို့မြင်ဘယ်လောက်ကြီးနှင့်ကြယ်။ ကျနော်တို့အကြောင်းစဉ်းစား၏အနာဂတ် Patreon သင်ျသွားဖို့တော်တော်လေးမင်းအတွက်ကြောက်မက်ဘွယ်သောနှင့်ရလဒ်အဖြစ်၊ကျွန်တော်တို့ပေးဆပ်ရန်ဆန္ဒရှိအပေါင်းတို့၏အဖိုးနှင့်အတူဆက်စပ်ရတဲ့ဂိမ်းအတွင်းမပါဘဲတစ္ရပ္လုံးတယ္။ ကျနော်တို့လက်ရှိတွင်အပံ့ကိုယ်ကိုကိုယ်နှင့်အတူအပစ္အပေးအယူနှင့်အချိုးပင်သူတို့အပေါ်မှာ–ကျေးဇူးအများအားဖြင့်ကြောင့်ကြီးမားသောအရွယ်အသံုးျပဳသူမ်ားအခြေစိုက်စခန်း! ဒါဟုတ္တယ္:သင်ကကြိုးစားချင်တယ်ဆိုရင် ၁၀၀ ကျော်သင်ျဂိမ်းများကနေ Patreon၊အားလုံးအခမဲ့များအတွက်၊ဤအရပ်ဖြစ်ပါသည်။
ဒီဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းများ၏တပြင်လုံးကိုအစီအစဉ်ကလူမပြုစေခြင်းငှါသဘောပေါက်:Patreon သင်ျဂိမ်းများသည်သင်ဂိမ်းမှလိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဖို့ဘာမှမ! ကျနော်တို့ရရှိပါသည်အရာအားလုံးကိုအပေါ်ရာက္ဇာနိုင်အောင်ဝန်သင့်ရဲ့ဂိမ်းအတွက်လက်ငင်းနှင့်ကစားမပါဘဲသူတို့ကိုမည်သည့်ဒေသခံဖိုင်အကြောင်းလိုအပ်သည်။ သင့်ရဲ့ကယ်တင်ပြည်ထောင်စုလည်းညှိဖို့ကျနော်တို့ရဲ့သည်မိုဃ်းတိမ်ဝန်ဆောင်မှု၊အောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်အဘယ်သို့ခြေရာခံစောင့်ရှောက်ဖို့သင်ပြုသောအမှုဖွင့်ခြင်းနှင့်အခြေခံအားဖြင့်သေချာသောရှေ့ဆက်သွား၊အဘယ်သူမျှမကိစ္စရပ်များကိုနှင့်အတူသင့်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုမှမှတဆင့်တိုးတက်မှုအကြောင်းဂိမ်းများကိုဆက်ကပ်။, ကျွန်တော်အထင်အဲဒီအဖြစ်နိုင်အကောင်းဆုံးအင်္ဂါ၏Patreon သင်ျဂိမ်းများများအတွက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအရေ။ ပထမ၊မညမ်းဂိမ်းအပေါ်သင့်စက်ကောင်းတစ်လမ်းဖြစ်သောသေချာစေရန်အဘယ်သူမျှမသိနိုင်ရာအဘယ်အရာကိုတစ်ဦးကညစ်ပတ်သင်ျစှဲသင်! ဒုတိယအ၊သင်အပြေး၏အန္တရာယ်ရှိခြင်း၏မည်သည့်ဗိုင်းရပ်စ်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်၊အပေါင်းကယ်တင်နိုင်ခြင်း–သောတော်တော်လေးအပြစ်တင်ဖွယ်အေးမြလျှင်သင်ကျွန်တော်တို့ကိုမေးမြန်း! ကျွန်မတို့ဆီမှာဒေသခံဗားရှင်းလျှင်သင်အမှန်တကယ်ချင်တယ်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကြောင်းစဉ်းစားဖို့ဝေးကောင်း၏င်ပဲကစားဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ဖူးမှအ–တွေအများကြီးကိုမှန်ကန်စေသည်ပိုပြီးအဓိပ္ပါယ်ရှိသောလမ်း!
ငါပြောပြီင့်အတော်လေးတွေအများကြီးဒီလောက်ဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအကြီးမြတ်ဆုံးအစက်အပြောက်များအတွက်အွန်လိုင်းညမ်းဂိမ္းသင်ျပျော်စရာ၊နဲ့ကျွန်မထင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ကွန်း Patreon၏ခေါင်းစဉ်အမှန်တကယ်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်၊ဒါပေမယ့်အခုအချိန်ငါ့အဘို့အရှေ့ဆက်သွားရုံသင်ဖိတ်ခေါ်တွင်းကြည့်ရှုနိုင်အောင်သင်ကိုယ်တိုင်အဘို့အဘယ်သို့ငါပြောမယ်။ ဂုဏ်အလာတစ်လျှောက်နှင့်အောက်မေ့သတိရလျှင်သင်လိုအပ်ရန်အနိုင်ကစားရန်အချို့သောအသင်ျ XXX ပျော်စရာရှိပါတယ်၊တစ်ဦးတည်းသာအပြောက်အင်တာနက်ပေါ်မှာသင်လိုအပ်မှစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကို။ စောင့်ရှောက်မှုယူပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာခံစားလို့တောက်ချွတ်အနည်းငယ်ဝန်ဖို့အကောင်းဆုံးမင်း Patreon သင်ျပတ်ပတ်လည်ဂိမ်း!